E-Journal: May 2009
နူးညံ့သိမ်မွေ့၊ ပြေပြစ်သော ချစ်ဖွယ်စကားကို ဆိုတတ်သူဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြောပုံဆိုပုံ အသံနေအသံထားကအစ လှပအောင် လေ့လာသင့်တယ်။
အမူအရာလှပတာလည်း ရှိတယ်။ ပြောပုံဆိုပုံလှတာလည်း ရှိတယ်။ ပြောပုံဆိုပုံ အသံနေအသံထားကအစ လှပအောင် လေ့လာသင့်တယ်။ ကိုယ်အမူအရာ နှုတ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးလှပမှုဟာ တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာ ဖြစ်တယ်။
အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ ကိုယ်အမူအရာ နှုတ်အမူအရာရှိတဲ့သူဟာ ချစ်သူခင်သူ ပိုများတယ်။
ကိုယ်အမူအရာ နှုတ်အမူအရာ ကြမ်းတမ်းတာဟာ မလှပတဲ့အမူအရာဖြစ်တယ်။ မောက်မောက်မာမာ ပြောဆိုတာဟာ မလှတဲ့ အမူအရာဖြစ်တယ်။ အမူအရာမလှတဲ့သူကို မဆက်ဆံချင်ဘူး။ ဆက်ဆံရရင်လည်း စိတ်မချမ်းသာဘူး။
စကားအပြောအဆို ကြမ်းတမ်းတာလည်း ယုတ်ယင်းမှု၊ ကြမ်းတမ်းမှုဖြစ်တယ်။
”ဖရုသဝါစာ“ ကြမ်တမ်းသောစကားကို မပြောရဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သူပြောတဲ့စကား၊ သူသုံးတဲ့ စကားလုံးကို ကြည့်ပြီး မှန်းလို့ရတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကို ဂုဏ်ယူပြီးပြောလာရင် အဲဒီလူဟာ စိတ်ဓာတ်ပါ ကြမ်းတမ်းလာမယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားဟာ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကို အများဆုံး လွှမ်းမိုးတယ်။
စကားကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောတာလည်း ယဉ်ကျေးမှု နိမ့်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ လိုတာထက် ပိုပြီး အသံကျယ်နေရင် မကောင်းဘူး။ တကယ်လေးနက်တဲ့ စကားကို ပြောချင်ရင် မတိုးမကျယ်ပြောမှ လေးနက်တယ်။
* (အလှတရားမှ အမှန်တရားသို့ - ဆရာတော်ဦးဇောတိက) မှ ထုတ်နုတ်ပါသည်။
စကားပြောပုံဟာလည်း လူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထဲမှာပါပြန်တယ်။ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းက စရိုက်သဘာဝကို ထင်ဟပ်ပြတယ်။ စကားလုံးရိုးရိုးသုံးတဲ့လူရဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ ခေတ်စကားများများသုံးတဲ့လူရဲ့ စိတ်အခြေအနေချင်း မတူဘူး။ ဘဝကို လေးလေးနက်နက် သဘောထားပုံချင်း မတူဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု၊ သူတစ်ပါးကို လေးစားမှုချင်းလည်း မတူဘူး။ ဒီနှစ်ဦးဟာ ဘယ်အရာကိုမဆို လေးလေးနက်နက် သဘောထားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ပေါ့ပေါ့တန်တန် အပေါ်ယံလေး သဘောထားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြနေတယ်။
* (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေရန် - ဆရာတော်ဦးဇောတိက) မှ ထုတ်နုတ်ပါသည်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့၊ ပြေပြစ်သော ချစ်ဖွယ်စကား၏ အင်္ဂါ(၇)မျိုး …
(၁) “နဠ” - အပြစ်ကင်း၏။
(၂) “ကဏ္ဍသုခ” - နားချမ်းသာ၏။
(၃) “ပေမနီယ” - နှစ်သက် မြတ်နိုးဖွယ် ရှိ၏။
(၄) “ဟဒယင်္ဂမ” - မထိခိုက်ဘဲ ချမ်းသာစွာ စိတ်နှလုံးသို့ သက်ဝင်၏။
(၅) “ပေါရီ” - နေပြည်တော်သူ မြို့ကြီးသားတို့ ပြောဆိုတဲ့ စကားလို ယဉ်ကျေး၏။
(၆) “ဗဟုဇနကန္တ” - ကြားရသူ အများနှစ်သက်၏။
(၇) “ဗဟုဇနမနာပ” - လူအများ စိတ်ကို နှစ်သက် မြတ်နိုးသည်၏ အဖြစ်ဖြင့် တိုးပွားစေ၏။
နူးညံ့သိမ်မွေ့၊ ပြေပြစ်သော ချစ်ဖွယ်စကားကို ဆိုတတ်သူဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး “သာခလျ”သဘော(၃)ရပ် …
၁။ “သဏှဝါစတာ” - ပြေပြစ်သော စကားရှိသူ၏ အဖြစ်။
၂။ “အဖရုဿဝါစတာ” - နူးညံ့သိမ်မွေ့သာ စကားရှိသူ၏ အဖြစ်။
၃။ “သခိလဝါစတာ” - မကြမ်းတမ်းသော စကားရှိသူ၏ အဖြစ်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့၊ ပြေပြစ်သော ချစ်ဖွယ်စကား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရား(၆)မျိုး …
မပြေမပြစ် အဖုအထစ်ရှိ၏။ အဆစ်၊အထုံး ရှိသလို၊ မချောဘူး၊ မပြေဘူး၊ ကြားရသူ စိတ်ထဲမှာ စိတ်ခုစရာ၊ မနှစ်သက်စရာ၊ အောင့်သက်သက်နှင့် ဘဝင်မကျစရာ စိတ်ထဲခလုတ်တိုက်တာမျိုး ဖြစ်ရတဲ့ ခံစားချက်သဘော။ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အပြောအဆိုမျိုး၊ နာရသူရဲ့စိတ်ထဲမှာ နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကို ခံစားရစေသည်။
သူတစ်ပါးနား၌ ခါးစပ်သည်။သူတစ်ပါးကို စပ်ပူစေတတ်၏။ ကြားရနာရသူ စိတ်ထဲမှာ ဒေါသကို ဖြစ်စေတတ်၏။
နားမချမ်းသာဖွယ်ဖြစ်၏။ ဆွေးမြည့်၏။ ကြမ်းတမ်းခက်မာသည်။ သူတစ်ပါး မခံသာအောင် ပြောတဲ့စကားဟာ ကြားရသူရဲ့ နားထဲမှာ မချမ်းသာမှုကို ခံစားရစေသည်။
သွားလိုရာသို့ သွားခွင့်မပေးဘဲ ဆူးခက်ကဲ့သို့ အလွန်ငြိတွယ်တတ်၏။ သူတစ်ပါးစိတ်ကို ထိခိုက်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ သဘော။ စကားပြောရင်း အနှောင့်မလွတ်၊ အသွားမလွတ်အောင် စောင်းချိတ်ပြောတဲ့ သဘော။သူတစ်ပါးကို သူလုပ်ချင်သလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့် မရအောင်၊ ဆူးခက်နဲ့ ငြိနေသလို နာလိုခံခက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ သဘော။ သူများရဲ့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တားဆီးဆွဲငင်တဲ့ သဘောနဲ့ စကားနာထိုးတာမျိုး၊ စောင်းပြောတာမျိုး။ သူတစ်ပါးစိတ်ကို ချုပ်ချယ်လိုတဲ့ သဘော၊ ဒါပေမဲ့ တည့်တည့်မပြောဘူး။ ကြားရသူစိတ်ထဲမှာ ထိခိုက်အောင်၊ ဒုက္ခဝေဒနာ ခံစားရအောင် ဒေါမနဿ ဖြစ်အောင် စောင်းချိတ် ပြောတာမျိုး။
သူတစ်ပါးကို စိတ်ဆိုးအောင်၊ အမျက်ဒေါသထွက်အောင် ပြောသည်။
တည်ကြည်မှု သမာဓိကို မဖြစ်စေသောတရား။
* ဆရာဦးဆန်းလွင်၏ “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ရည်ကိုသွေး မြင့်မားရေးတရား (ပထမအကြိမ်) ၊ စာ(၁၃၇-၁၄၂)” - မှ ထုတ်နုတ်ကူးယူပါသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 12:41 AM5comments
အတွေးအမြင်ကဏ္ဍမှ စာစုလေးများ အကြောင်း (၇)
ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာလေးရဲ့ ဆိုဒ်ဘားလေးမှာ သတင်းနှင့်အတွေးအမြင်ဆိုပြီး အတွေးစာစုလေးတွေကို ဝိုင်းတော်သားတွေ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ အတော်များများရှိနေပြီဆိုတော့ မှတ်တမ်းလေးလိုလည်းဖြစ်အောင် တင်ထားတဲ့အတွေးအမြင်တွေကို အဟောင်းဆုံးကနေစပြီး ကျွန်တော်က ခံစားထားတာပါ။ တစ်ခြားပိုစ့်လေးတွေကိုလည်း လင့်ခ်လေးတွေကနေ သွားဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂) အပိုင်း(၃) အပိုင်း(၄) အပိုင်း(၅) အပိုင်း(၆)
21st July 2008 - To be surrounded by positive people, you first putasmile on your own face.
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ အဲဒီ့ကောင်မကောင်းဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့လွယ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်စိတ်နဲ့မတွေ့ရင်ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အပေါင်းအသင်းကို တွေ့ပြီဆိုရင် “အေးကွာ - မင်းကမှတော်သေး ငါတော့နေ့စဉ် ဒီိလိုလူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတယ်” ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ စိတ်ပျက်မှုကိုဖော်ပြတတ်ကြတာပါပဲ၊ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်မိတဲ့နေရာမှာ စိတ်စောသလို ဖြစ်သွားတတ်တာပါ။ ရေလာမြောင်းပေးဆိုတဲ့ စကားလေးရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကလိုချင်ရင် လိုချင်တာကိုရအောင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ လမ်းကြောင်းပေးရတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူကောင်းတွေရှိ(လာ)ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က အေးစက်စက်မျက်နှာကြီးနဲ့ ညှင်းသိုးသိုးကြီးဆိုရင် ဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါရဲ့။ ကဲ အပြုံးလေးတွေ ဆင်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဗျာ။ တွေးကြည့်ချင်စရာ မဟုတ်လား။
21st July 2008 - Knowledge is Power. Power is nothing without Control. (အခြား)
ဗဟုသုတဆိုတာ စွမ်းအားတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီ့စွမ်းအားဆိုတာကလည်း ထိန်းချုပ်မှုမရှိရင် အလကားဖြစ်တာပါပဲ။ သဘောကတော့ ဗဟုသုတဆိုတာကို လမ်းကြောင်းပေးနိုင်ရင် စွမ်းအားတစ်ခုလိုပဲ အသုံးချနိုင်မယ်ပေါ့။ ကိုအခြား ရေးခဲ့တဲ့ အတွေးအမြင်လေးပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါတည်းဆက်ပေးသင့်တာက နောက်ထပ်အတွေးအမြင်လေးတစ်ခုပါ။
22nd July 2008 - အခြားတစ်ဖက်မှဆင်ခြင်ရန်မျှသာ… Knowledge is not Power. Knowledge is just potential. Implementation is Power.
ကိုမာရေးသျှင်ရဲ့ အတွေးအမြင်လို့ထင်ပါတယ်။ သူပြောသလိုပဲ အခြားတစ်ဖက်ကနေ ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဗဟုသုတဆိုတာ စွမ်းအားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုခုကို ရထားလိုက်သလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအားတစ်ခုဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွေကသာ စွမ်းအားဖြစ်စေတာပါ။ ဒီတော့ ဗဟုသုတ၊ စွမ်းအား၊ ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု ဒါတွေကိုဆက်စပ်ကြည့်ဖို့ လိုလာတယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန်လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စောင်းအတတ်ကိုသင်တော့ ဆရာကမေးသတဲ့ - မင်းတို့နှစ်ယောက် စောင်းကိုဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်အောင် တီးတတ်သလဲ။ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်က အနည်းအကျဉ်းတီးတတ်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လုံးဝမတီးတတ်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ဆရာက စောင်းအတတ်သင်ဖို့ ကန်တော့ကြေးသတ်မှတ်တော့ အနည်းအကျဉ်းတီးတတ်တဲ့သူက များနေပါသတဲ့။ ဒါကိုမကျေနပ်လို့ သူငယ်ကအမေးရှိလာတော့ - ဟိုကောင်က ဘာမှမတီးတတ်လို့ ငါသင်ရတာလွယ်မယ်။ မင်းကတော့ မတောက်တခေါက်ဖြစ်နေလို့ ငါသင်ရတာ ပင်ပန်းမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပိုများနေတာလို့ ရှင်းပြသတဲ့။
ဒီပုံပြင်ကို မြန်မာလူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့တယ်ထင်ပါတယ်။ အများစုက ဘာမှမတတ်ကြဘူး။ သူတို့တစ်ကယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် အကုန်အကျသက်သာအောင်ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတာက အနည်းအကျဉ်းသော ဗဟုသုတဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိကြောင်းလည်း မှတ်သားလေ့ရှိကြသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမသိတာနဲ့စာရင် အနည်းအကျဉ်းလည်း မဆိုးပါဘူးပြောချင်တာပဲ။ ငါအကုန်မသိနိုင်သေးဘူး လိုအပ်ချက်တွေနဲ့၊ လေ့လာစရာတွေဆိုတာ အများကြီးပါလို့ စိတ်မှာတွေးနေတတ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဗဟုသုတက အန္တရာယ်ဖြစ်လာဖို့ အတော်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေမှာပါ။
တကယ်လို့ ဗဟုသုတသာ မရှိဘူးဆိုရင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို (ကိစ္စတစ်ရပ်ကို) ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုဆိုတာတွေရဖို့ မလွယ်ဘူးမဟုတ်လား။ အဲဒီလိုသာဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဦးချင်းစွမ်းအင်၊ အပေါင်းအစုစွမ်းအင်၊ နိုင်ငံ့စွမ်းအင်ဆိုတာ ဝေးနေအုံးမှာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဗဟုသုတဆိုတာကို ရနိုင်သလောက်စုဆောင်းပါ။ နောက်ပြီးရင် ကိုယ့်အသိစိတ်လေးနဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာကို ထိန်းချုပ်ရင်း ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်အောင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာ အားကောင်းလာမှာပေါ့။ စဉ်းစားမိတာပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:47 PM3comments
ခိုးလို့ ဖျစ်ကြည့်ဖူးသလိုပ -
ဉာဏ်နည်းလို့ - လို့ဆိုရင်
သုခမိန် (image link)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:31 PM5comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း, သုခမိန်, အရောင်စုံ အတွေးများ . . . . .
(ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းတော်သားဖြစ်သော၊ ကဗျာကိုချစ်တတ်သော Rhyme-ဆိုသည့် ညီမလေး၏လက်ရာပါ ခင်ဗျား။ ရှားရှားပါးပါးရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ မှားမှားနေကြလို့။း) - သုခမိန် )
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 9:13 AM5comments
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေရဲ့ ရက်တွေလတွေ နှစ်တွေမှာ အမှတ်တရနေ့ရက်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေ့တွေ၊ အများနဲ့ပါ သက်ဆိုင်တဲ့နေ့တွေ၊ ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့နေ့တွေ။ အများကြီးပါပဲ။ အားလုံးကိုမှတ်မိနေဖို့ဆိုတာ မလွယ်သလို အားလုံးကို ဂရုတစိုက်လည်း သတိရမနေနိုင်၊ မကျင်းပနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က မွေးနေ့ဆိုတာလေးကို အမှတ်တရ အမြတ်တနိုးရှိတတ်ကြပေမဲ့ တစ်ချို့ကတော့ သူ့ဘာသာသူ နှစ်စဉ်ရောက်နေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ဘာအထူးအဆန်းလုပ်နေရမှာလည်းလို့ တွေးတတ်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမေ့သင့်တဲ့ရက်တွေဆိုတာ အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိနေတတ်တာပဲမဟုတ်လား။
အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ (အထူးသဖြင့် မြန်မာဘလော့ဂ်တွေမှာ) စိတ်ထဲတစ်မျိုးလေး ခံစားနေရတာလေးကိုပါ။ သဘောအားဖြင့်တော့ မြန်မာဘလော့ဂ်လောကမှာ ကျင်လည်နေသူတွေက နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းတွေပါ။ အသက်အရွယ်စုံ၊ အလေ့အထစုံလင်ပြီး အကြောင်းအရာကလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ချို့စာတွေဆို အလကားဖတ်ရတာ အားနာသလိုဖြစ်လောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရဲ့ သဘောတရားလေးအရ တူရာတူရာလေးတွေစုမိပြီး အဖွဲ့ကျသွားကြတာပါပဲ။ နောက်ပြီး ဘလော့ဂ်လေးတွေအပေါ်မှာ အမှတ်တရ ရေးတာလေးတွေ၊ ပြန်လည်ဝေမျှတာလေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လေး တစ်နှစ်ပြည့်၊ ဘာနေ့ညာနေ့ စသဖြင့်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောလေ့ရှိတာလေးတစ်ခုကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဘာတဲ့ ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာ။ ဟုတ်ပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဝင်ဆန့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့တောင် သုံးချင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ နိုင်ငံခြားမှာနေတာပဲ ရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းမကျတောင် နီးစပ်အောင်၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်က ကန့်လန့်ဖြစ်မနေအောင် နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ တရုတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာ တတ်နိုင်သလောက်ဝင်ဆင်နွှဲ၊ နီးစပ်ရာ မိတ်တွေကိုလည်း နှစ်ကူးမင်္ဂလာစကားလေး ဘာလေး ပြောပေါ့။ ဒါကောင်းတာပဲ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ မင်းတို့နှစ်ကူးလည်းကူးပေါ့ ငါတော့စိတ်မဝင်စားဆိုရင် ဘယ်ကောင်းမလဲ။
အဝေးရောက်တာကြာတော့ တစ်ချို့လည်းကိုယ့်နိုင်ငံက နေ့ထူးနေ့မြတ် သတိရစရာ အမှတ်ရစရာတွေကို မေ့နေရင်မေ့နေမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရောက်နေရာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပလေ့ရှိတတ်တဲ့နေ့တွေကို သတိထားမိရင်းကနေ ငါတို့ဆီမှာဆိုရင် ဒီပွဲက ဘာပွဲနဲ့တူတာပေါ့ကွာ၊ ဘာညာနဲ့ မှတ်မိနေသင့်ပါတယ်။ တစ်နှစ်မမှတ်မိတောင် တိုင်းပြည်လွမ်းစိတ်နဲ့ သတိတွေထားမိလာရင်း မှတ်မိသင့်တဲ့ နေ့တွေရှိတာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးကလည်း ပြားလာတယ်ပြောတယ်၊ ရွာဖြစ်သွားတယ်လည်းပြောတယ် ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်။ ဟိုးအရင်က ကမ္ဘာမပြားကြောင်းကို အသဲအသန်ငြင်းဆန်ခဲ့ရသူတွေများ ရုတ်တရက်ကြားရင် စိတ်ရှုပ်စရာ။ တိုးတက်တယ်လည်းပြောရဲ့ မြို့ကြီးဖြစ်မလာဘဲ ရွာဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာက စိတ်ကိုသတိကပ်ထားမှကို တော်ကာကျမယ်ထင်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း တိုးမိတိုက်မိတယ်ပြောတာကိုး။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်လောက်က မြန်မာနှစ်ကူးပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ သင်္ကြန်ရက်တွေရောက်မှပဲ စီဘောက်စ်တွေမှာ ရေလိုက်လောင်းတာတို့၊ သင်္ကြန်အမှတ်တရ ပိုစ့်တွေ၊ ကဗျာတွေ စသည်ဖြင့်တွေ့လာရတယ်။ ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တာက သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ခပ်စောစောလေးမှာ တို့တွေရဲ့နှစ်ကူးတော့ ရောက်တော့မယ်ဆိုပြီး ပိုစ့်တွေ ရေးစေချင်တာပါ။ မတွေ့ရသလောက်ပဲ။ ခရစ်နှစ်ကူးမှာဆိုရင်တော့ ပြားသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ရွာကြောင့်လား၊ ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လားတော့မသိဘူး ခပ်စောစောကတည်းက ဟက်ပီးနယူးရီးယားနေတာ မျက်စိတောင်နောက်ချင်ချင်ရယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါအမတစ်ယောက်ကတော့ ပြောပါတယ် - စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် ရွှေမြန်မာတွေလည်း တည်မြဲရေးကြိုးစားနေရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ထင်ပါသတဲ့။ ဒါလည်း ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပါပဲ။
အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ထဲမှာပြောချင်ချင်ရက်တွေက အများသားပါ။ နှစ်ကူးဆိုတာကလည်း သဘောပြောတာပါ။ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ရေးဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ကဆုန်လပြည့်ကြောင့်ပါ။ ခရစ်စမတ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပွဲကြီးလိုပါပဲ။ ဘာသာရေးပွဲဆိုပေမဲ့ အတော်လေးကို လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ လူအများစု ကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေလို့လားပဲ။ ထားပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တဲ့ နေ့လေးတွေကိုတော့လည်း မှတ်မိသင့်တယ်။ သတိပြုသင့်တာလေးတွေဆိုရင်လည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ ကဆုန်လပြည့်မှာမွေး၊ ကဆုန်လပြည့်မှာ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၊ ကဆုန်လပြည့်မှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါသတဲ့။ ရိုးသားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အိမ်မှာပဲ မြန်ပြည်ကဘုရားတွေကိုမှန်းဆလို့ ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ကြသလား၊ မေ့ပဲနေသလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဘာမှမဟုတ်တောင် အနည်းအကျဉ်းတော့ ညောင်ရေသွန်းပွဲလေးကို အမှတ်ရသင့်ပါတယ်။ တိုးတိုက်မိသူခြင်း အင်အားကွာသွားကြတာများလား။ စဉ်းစားမိတာပါ။
အင်း.. ဒီလိုနေ့တွေ အများသားဗျ။ အကုန်မမှတ်မိနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလည်း ရှိသေးဆိုပေမဲ့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ထင်တာတွေကိုတော့ ထိန်းသိမ်းစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်တွေက ပိုလို့တောင်သိသင့်ပါတယ်။ များများသိလေ ကောင်းလေပေါ့ဗျာ။ သူများနဲ့ပြောစရာကြုံလာရင် အင်..အဲ…တွေအများသားနဲ့ ခွေးအလှည်းနင်းနေရင် ရှက်စရာမဟုတ်လားဗျာ။ တစ်ချို့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ နေ့လေးတွေကို အမှတ်တရရှိစေချင်ပါတယ်။ ရေးစေချင်တယ်၊ ဝေမျှစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် ဝေမျှစေချင်ပါတယ်။ ပြောသာပြောရတာပါ ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဘာနေ့ ညာနေ့ဆိုတာမျိုးတွေကို မသိတာများပါတယ်။ တကယ်က ဗဟုသုတနည်းတာပါ။ အမှတ်တရတွေလုပ်ရတာကိုက သိပ်ဝါသနာပါတာ။ တစ်ချို့လူတွေကျတော့လည်း ရောင့်ရဲနိုင်တာလား၊ အသည်းမာတာလားဆိုတာကို မပြောနိုင်လောက်အောင် သတိတရ အမှတ်တရဖြစ်သင့်တဲ့နေ့တွေကို မေ့ထားနိုင်တယ်။ ဟန်ဆောင်တောင်မှ လုပ်လေ့မရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ဘာမှမတတ်နိုင်ရင် (မပြောနိုင်ရင်တော့လည်း) မသိသလို နေလိုက်ရတာပဲလေ။ ကျွန်တော်က မွေးနေ့ဆိုတာလေးကို မျှော်လင့်ပြီး အမှတ်တရရှိသလောက် ကျွန်တော်သဘောကျနေတဲ့ကောင်မလေးက ဘာမှလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိပဲနဲ့တဲ့။ ကဲ.. မခက်လားဗျာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 10:46 PM7comments
လူရွယ်ဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာ Henri Matisse က ပန်းချီကျော်ဆရာကြီး Renoirဆီ၊ သူ့ပန်းချီခန်းကို အပတ်စဉ်အလည်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဆရာရီနွာ(Renoir) က အဆစ်ရောင်ရောဂါဒဏ်ကို ခံစားရတဲ့အခါမှာ မာတီးစ်(Matisse) ကနေ့တိုင်းလိုသွားပြီး ဆရာ့အတွက် အစားအသောက် ပြင်ပေးတယ်၊ စုတ်တံတွေ ပန်းချီကားတွေ ပြင်ဆင်ပေးရင်းနဲ့ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လွန်းလို့ အနားယူဖို့ ဆရာ့ကို ပြောရတယ်။
တနေ့မှာတော့ ဆရာစုတ်တံတချက်ဆွဲလိုက်တိုင်း နာကျင်လွန်းလို့ညီးတွားသံကို ကြားတော့ တပည့်ကျော်က ဆရာ့ကို မနေနိုင်လို့ ပြောပါတယ်။
- ဆရာရယ် ပန်းချီကားတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ အများကြီးကိုလည်း ဖန်တီးပြီးပါပြီ။ ဘာလို့များ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညဉ်းပန်းနေတာပါလဲဆရာရယ်။
- ရိုးရိုးလေးပါပဲကွယ်။ လို့ ဆရာ ရီနွာက ပြန်ပြောပါတယ်။
အလှတရားက ကျန်ခဲ့တယ်လေကွယ်၊ နာကျင်မှုဆိုတာ ပျောက်သွားတာပါတဲ့။
Paulo Coelho ၏ စာကို ဘာသာပြန်သည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:48 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 5:29 PM 8 comments
ကျနော်လည်း ဘလော့လောကကနေ ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြီးကို ကြာပါပြီ။
ဒီလောက်ကြာမှ ဘာထ စိတ်ရူးပေါက်လည်း မေးရင်တော့လည်း ပြုံးနေယုံမှ တပါး ကျနော်လည်း ဘာမှ မဖြေတတ်တော့ပါ။ ရေးချင်တာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ် လူက မအား တခါတလေတော့လည်း စိတ်က မအားပါ ။ နောက် စိတ်က အရင်လို မကြည်လင်။ အဲလို ချာလပတ်တွေရမ်းရင်း၊ အပျင်းတွေ ထူရင်း ဘလော့ လောက ကနေ ပျောက်နေဖြစ်တာ တော်တော် ကြာပါပြီ. ဒီနေ့တော့ Internet မှာ မွှေရင်း သဘောကျတာလေး တခုတွေ့လို့ တင်လိုက်ပါတယ် ။ Technology က ကျနော် တို့ အိမ်မက် မက်ခဲ့ကြသလို ဖြစ်လာဖို့ နီးလာနေပါပြီ။ ကျနော် ယခု Six Sence Technology ဆိုတာလေး ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်. . ထွင်တဲ့ သူကတော့ ကျနော် .မောင် တာတူး . . . . . . . . . . .လို့ မထင်ပါနဲ့လို့ . . . :P .
Technology နဲ့ ပက်သက်ရင် နာမည်ကြီးတဲ့ MIT က ကျောင်းသား/ သူ တွေ (Pranav Mistry၊ Dr. Pattie Maes) ပါ။
Dr. Pattie Maes
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:23 PM4comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုတ ပန်းခင်း
”အသိတေ ပိတေ သာယိတေ ခါယိတေ သမ္ပဇာန ကာရီဟောတိ“
”စားတုန်း၊ သောက်တုန်း၊ ခဲတုန်း၊ လျက်တုန်းမှာ သတိလေးနဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ ပြုပါ။“
ဘုရားဟောထဲမှာတော့ ရဟန်းတွေအတွက် အသေးစိတ်ဟောထားခဲ့တယ်။ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတဲ့အခါမှာ ဆွမ်းလုတ်ကို လုံးလုံးညီညီလေး လုပ်ရမယ်၊ လုပ်ပြီးတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ရမယ်၊ ပွကြဲပြီး အောက်ကို ပြန်မကျရဘူး။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထမင်းစားတဲ့အခါလည်း လက်နဲ့ဖြစ်စေ၊ ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့ဖြစ်စေ စားတဲ့အခါ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် အေးချမ်းအောင်ထားပြီးတော့ ထမင်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး ဖြစ်အောင်၊ ဇွန်းသံ၊ ပန်းကန်သံလည်း မကြားအောင်၊ ဘေးကိုလည်း မကျအောင်လုပ်ပြီးမှ ပါးစပ်ထဲကို ရောက်အောင် ထည့်ရမယ်၊ တစ်လုံးမှ ကျမသွားအောင် ပြန်ထုတ်ယူရမယ်။
ဟင်းချိုသောက်တဲ့အခါမှာ ရဟန်းတော်များအတွက် ဘုရားဟောထားတာ ရှိပါတယ်။ ”ရဟန်းတော်များ ဟင်းချိုသောက်တဲ့အခါမှာ ရှရူး ရှရူး အသံမမြည်စေနဲ့“ တဲ့။
အစားအစာ(ဘောဇဉ်)၌ အတိုင်းအရှည် သိတတ်သူ ဖြစ်ကြောင်းတရား (ဘောဇနမတ္တညုတ)ကို ဘယ်လို ဟောသလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားက သူ့သာသနာထဲက သားတပည့်တွေ ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားရေးကို ဦးတည်ပြီးဟောခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့် အဆင့်မြင့်လူသား ဖြစ်ချင်သူတိုင်းအတွက် ဒီဟောကြားချက်တွေဟာ အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။
အစားအသောက်စားတဲ့အခါ ဉာဏ်အဆင်အခြင်မပါဘဲ မစားရဘူး။ ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး သင့်လျော်သောအားဖြင့် စားရမယ်တဲ့။
(က) ကချေသည်၊ ကျွမ်းသမားတို့လို မြူးထူးပျော်ပါးခြင်းငှာ မစားရဘူးတဲ့။
(ခ) မင်းစားသလို၊ မှူးမတ်တွေ စားသလို မာန်ယစ်ခြင်းငှာလည်း မစားရဘူးတဲ့။
(ဂ) ပြည့်တန်ဆာမတွေ နန်းတွင်းသူတွေလို ခန္ဓာကိုယ်လှပခြင်းငှာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆာဆင်ခြင်းငှာ မစားရဘူးတဲ့။
(ဃ) လက်ဝှေ့သည်၊ လက်ပန်းသည်၊ နပန်းသမားတွေလို အသားအရေကို ပြည့်ဖြိုးခြင်း၊ တိုးပွားခြင်းငှာလည်း မစားရဘူးတဲ့။
မြတ်စွာဘုရားက အစားအစာ(ဘောဇဉ်)၌ အတိုင်းအရှည် သိတတ်သူ ဖြစ်ကြောင်းတရား ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြထားတယ်။
(က) ဤကိုယ် တည်တံ့ရန်
(ဂ) ပင်ပန်းခြင်းကို ပယ်ဖျောက်ရန်
(ဃ) ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း ငြိမ်းရန်
(င) မြတ်သောအကျင့်ကို ချီးမြောက်ရန် အကျိုးငှာသာလျှင် အစာအာဟာရကို စားသောက်ရမယ်တဲ့၊ ဒီနေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားက အစာအာဟာရကို စားသောက်ခြင်းကြောင့် ခံစားမှု ဝေဒနာအဟောင်း၊ ဒါက အစာမစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဝေဒနာကို ပယ်ဖျောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စားရမယ်။ ခံစားမှု ဝေဒနာသစ်ဆိုတာက အလွန်စားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာမျိုးလည်း မဖြစ်စေရအောင် ဆင်ခြင်တိုင်းထွာပြီး စားရမယ်။ ဘယ်လိုဆင်ခြင်တိုင်းထွာရမလဲဆိုတော့ ငါ့အား မျှတခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ အပြစ်မရှိခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ချမ်းသာစွာနေရခြင်းသည်လည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်ထား၍သာ အစာအာဟာရကို စားရမယ်တဲ့။
(၁) ရောင့်ရဲသူ၏အဖြစ် ”သန္တုဋ္ဌိတာ“ရှိရမယ်။
(၂) အတိုင်းအရှည်ကို သိသူ၏အဖြစ် ”မတ္တညုတာ“ရှိရတယ်။
(၃) စားဖွယ်ဘောဇဉ်ကိုဆင်ခြင်သူ၏အဖြစ် ”ပဋိသင်္ခါဘောဇဉ်“ရှိသူ ဖြစ်ရမယ်။
ဆရာဦးဆန်းလွင်၏ “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ရည်ကိုသွေး မြင့်မားရေးတရား (ပထမအကြိမ်) ၊ စာ(၁၅၇-၁၅၈)” - မှ ထုတ်နှုတ်ကူးယူပါသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:37 PM5comments